Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Khafiifka ah | Warshadda Maqaska Khafiifka ah ee Shiinaha
Maqsinnada Xayawaanka Caatada ah
Maqashan xayawaanaadka khafiifinta khafiifka ah wuxuu ka samaysan yahay bir birta ah oo tayo sare leh, heerka khafiifinta ee 70-80%, mana jiidayo ama ma qabsan doono timaha markuu jarayo
Dusha sare waxaa laga sameeyaa tiknoolajiyadda isku-darka ah ee titanium-ka, oo ah mid dhalaalaya, qurux badan, fiiqan oo adkeysi leh.
Maqashan qurxinta xayawaanka khafiifka ah ayaa noqon doona kaaliyaha ugu wanaagsan ee lagu jaro dhogorta ugu dhumuc weyn iyo tanlalka ugu adag, taas oo ka dhigaysa goynta qurxinta mid aad u qurux badan.
Maqaska xayawaanka ee khafiifka ah ayaa ku habboon isbitaalada xayawaanka, meelaha lagu qurxiyo xayawaanka, iyo sidoo kale eeyaha, bisadaha iyo qoysaska kale. Waad noqon kartaa xirfadle qurxin iyo qalab qurxinta xayawaanka guriga si aad u lumiso waqti iyo lacag
Maqasyada Goynta Timaha
23 ilkood oo ku yaal daabka shanlada leh ayaa tan ka dhigaya mid aad u fiican oo ujeeddo u ah maqaska timaha xayawaanka.
Maqasyada jarista xayawaanka xayawaanka ah ee loogu talagalay khafiifinta.it sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa jarista fudud, oo ku habboon dhammaan noocyada dhogorta. Nalka fudud ee fudud wuxuu ka dhigayaa goynta eeyaha yar yar kuwo aamin ah oo fudud, qof walbana wuu u isticmaali karaa inuu timo u jaro.
Iyada oo maqaskan goynta timaha xayawaanka ah ee fiiqan oo wax ku ool ah, waxaad ka heli doontaa hagaajinta xayawaankaaga xayawaanku ma adka.